Somaliland oo shuruud ku xirtay wadahadalada in ay ku qabsoomaan dhul Soomaaliyeed… – Hagaag.com
Somaliland oo shuruud ku xirtay wadahadalada in ay ku qabsoomaan dhul Soomaaliyeed…
Mahdi Guuleed oo wareysi siiyay Idaacada BBC-da ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu diyaar u yahay inuu ka dego magaalada Hargeysa, lana gaaray waqtigii wada hadalku ka bilaaban lahaa dhul Soomaaliyeed.
“Madaxweyne Farmaajo wuxuu diyaar u yahay inuu ka dego magaalada Hargeysa, isagoo sida Calanka Soomaaliya”ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay arrinta wada hadalka u sameysay qorshe iyo jadwal la doonayo in xal lagu gaaro, balse arrintaas ay hakad geliyeen doorashooyinkii ka dhacay Somaliland, waxaa uu xusay inay horay isku afgarteen Mas’uuliyiinta Somaliland in wada hadalada dib loo bilaabo wixii ka dambeeya doorashooyinka Somaliland marka ay dhamadaan oo Madaxweyne la doorto.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ayaa sidoo kale sheegay inuu jiray qorshe Madaxda labada dhinac ku kulmi lahaayeen bishii Maarso ee sanadkan, hase ahaatee uu qabsoomi waayay kulankaas arrimo farsamo awgeed iyo xiisadii ka dhalatay dagaalkii Tukaraq.
Dhinaca kale Soomaaliland ayaa shuruud ku xirtay wada hadallo ka dhaca magaalooyinka Hargaysa iyo Muqdisho oo ay yeeshaan mas’uuliyiinta dowladda Federaalka iyo Soomaaliland.
“Waxaa ka horreeysa in wada-hadallada ay ka dhacaan Muqdisho ama Hargeysa , in la is ictiraafo oo Soomaaliland la aqoonsado.” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, Sacad Cali Shire oo la hadlay BBC-da.
“Wadahadalada inta laga gaarayo Soomaaliland in la aqoonsado waxaa lugu wada hadlayaa meelo kale oo markhaatiyaal leh .” ayuu ku daray wasiir Sacad.
Somaliland oo sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay tahay dal ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale, ayaa dooneysa inay hesho aqoonsi.